ကိုဗဈကို ခန်ဓာကိုယျထဲကနေ တိုကျထုတျဖို့ အဓိက လုပျဆောငျရမယျ့ နညျးလမျးတှေ ဝမြှေပေးခဲ့တဲ့ နီနီခငျဇျော – Shwe Likes
လက်ရှိ အခြေအေ နမှာ ကိုဗစ်ေ ရာဂါကူး စက်ပြန့်ပွား မှုတွေ ဟာ အတော်ကို ဆိုးရွားနေပြီး လူတော်တော် များများအော က်ဆီဂျင်ပြတ် လပ်တဲ့ အခြေ အနေများနဲ့ ရင်ဆိုင်ြ ကုံတွေ့နေရ ပါတယ်။
ဆရာဝန်များ ကလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်း ချုပ်ကာကွယ် နိုင်စေမယ့် နည်းလ မ်းများကို ပြည်သူတွေ သိရှိကြစေဖို့ အမြဲလိုလို ရေး သားဝေမျှေ ပးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် ကလည်း အဆိုတော် နီနီခင်ဇော် ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ တွင်ကိုဗစ်ေ ရာဂါကူးစက်ခံရ ပါက ပြုလုပ်ရမယ့် အရေးကြီးအချ က်အလက် များကို ဗဟုသုတရရှိစေဖို့ ဝေမျှပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေအနေဆိုးမှာ ကိုယ်ခံအား ကို အားကိုးပြီးရောဂါကို တိုက် ထုတ်ကြဖို့ အကြံပေး တိုက်တွ န်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အသက်တွေ အများကြီးရှိနေသလို လုံးဝနေပြန်ေ ကာင်းလာတဲ့ မိတ်ေ ဆွသူငယ် ချင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
အိမ်တိုင်းနီးပါး COVID positive ဖြစ်လာကြတဲ့ အတွက် အားလုံးစိ တ်ပူပင်နေ ကြတာကို မြင်တွေ့နေရတာ စိတ်မကော င်းဖြစ်ရတဲ့ အတွက် သူမသိသလောက် ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ ကိုရေး သားဝေ မျှပေးဖို့ စိတ်ကူးရ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက oxygen ပြသနာလို့ မြင်နေကြတဲ့ အပေါ် အိမ်မှာဘယ်လိုမျိုး Home Care Treatment ပေးနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုနေ ထိုင်သင့်တယ် ဆိုတာတွေကိုလည်း အခုလို ရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ပထမဦးစွာအေ န​အောက်မှာ ​ဖော်ပြထားတဲ့နဲ့ Covid Positive ရဲ့ လက္ခဏာတွေ တစ်ခုခု​သော်လ ည်း​ကောင်း အားလုံးလည်းေ ကာင်း​တွေ့ခဲ့ရင်
*** အရမ်း မစိုးရိမ်ပဲနဲ့ Treatment ​လေး​တွေ စပြီး လုပ်​စေချင်ပါတယ် ****
(စိုးရိမ်မှု လွန်ကဲခြင်းဟာ Oxygen Level ပိုလို့ ကျ​စေနိုင်ပါတယ်)
Positive ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ ထိ​တွေ့မှုရှိထားပြီး
ဘယ်လိုလူ​တွေ ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်သလဲ?
-က​လေးသူငယ်များ / သက်ကြီးရွယ်အိုများ
-ရောဂါအခံ ရှိထားသူများ(နှလုံး,​သွေးတိုး,ဆီးချို, အဆုတ်​ရောဂါ,ကင်ဆာ​ရောဂါ စသည်ဖြင့်….)ပိုဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
အိမ် မှာ ဘယ်လို Supportive Care ​တွေ လုပ်​ပေးနိုင်လဲ?
​သံသယဖြစ်စ ရာရောဂါလက္ခ ဏာတ စ်ခုခု​တွေ့ခဲ့မယ်ဆို ရင်
-တစ်ယောက်တည်း သီးသန့် အသုံးအဆောင် အိမ်သာ သုံးရန် ( အတတ်နိုင်ဆုံးပါ, မရှိရင် Mask ၂ထပ်တပ်ပြီး​တော့​နေပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တံခါးလက်ကိုင်​တွေနဲ့ ထိ​တွေ့ခဲ့တဲ့​နေရာ​တွေ အားလုံးကို အရက်ပြန် နဲ့ဖြန်း​ပေးပါ)
-လေဝင်လေထွ က်ကော င်းတဲ့​နေရာ မှာ​​နေပါ တံခါး​တွေ ဖွင့်ထား​ပေးပါ။
-အာဟာ ရပြည့်ဝစွာ စားသောက်ပါ(ကြက်ပေါင်း,ငှက်သိုက်, Vitamin C ပြည့်ဝ​သောအသီးအနှံ)
Blood Pressure Monitor( ​သွေး​ပေါင်ချိန်),Temperature တိုင်းရန် ​​တ​နေ့ ၃ -၄ ကြိမ်တိုင်း​ပေးပါ
Oximeter မှ SPO2-Oxygen 90 အောက် ရောက်လာမှသာ Oxygen စ​ပေးဖို့လိုပါမယ်။
(***ဒါ​ကြောင့်မို့ Positive ဖြစ်သူတိုင်း Oxygen လုံးဝလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး****)
လူငယ်​တွေနဲ့ ကိုယ်ခံအား​ကော င်းသူေ တွမှာ Oxygen မကျဘဲ ပြန်​ကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့်မို့ Oxygen အိမ်တိုင်း အလျင်စလိုဝယ်တာေ ဆာင်တာေ တွလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
ဖျားရင်-Paracetamol တစ်နေ့ ၃ကြိမ်( အစာနှင့်) (အစာအိမ်ရောဂါ အခံရှိရင် Pantocid or Omez နဲ့တွဲသောက်ပါ)
နှာစေးရင် Dazit or Lorantidine5mg ၁လုံး တ​​စ်နေ့ ၂ကြိမ် ​သောက်နိုင်ပါတယ်။
လည်ပင်းနာလျှင်~ Betadine throat spray အာ​ခေါင်ကိုဖြန်းပါ။
-ရေနွေးနဲ့ ဆား အာလုတ်ကျင်းပါ။
ချောင်းဆိုရင်~ bronchest or attusin tablets တနေ့၃ကြိမ်
အဖျားကြီးရင် ရေပတ် တိုက်ရန်(နဖူး,ဂျိုင်းကြား,ပေါင်ခြံကြား) ရေအေးဝတ်နဲ့တိုက်ပါ။
ကိုယ်ခံအားမြှင့်တင်ေ ပးတဲ့​ဆေးဝါး ​တွေကို ​တ​​​စ်နေ့တလုံး​​​သောက်နိုင်ပါတယ်
-ImunActiv or immusense ၁နေ့၁ကြိမ်
-Enervon C or vitacee တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် VitaminC 500mg
– Vitamin D3 20mg
– Becozinc တ​စ်နေ့ တစ်လုံး ​​​သောက်ပါ။
– ကျန်းမာ​ရေး ညွှန်ကြားချက်များ အမြဲလေ့လာပါ။
-အပြင်သွားရင် သို့မဟုတ် ​ရောဂါရှိသူနဲ့အိမ်မှာ တူတူ​နေရရင်Double Mask အမြဲဝတ်ဆင်ပါ။
-အရက်ဖြန် Spray , Hand Sanitizer အမြဲသုံးပါ။
-နှာစေးချောင်းဆိုးရင် ပုဝါကာပါ Mask တပ်ထားပါ။
-အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုလုပ်ရန်(အဆုတ်သန့် အဆုတ်အားကောင်းစေသော)
****အ​ရေးအကြီးဆုံးက​တော့ Facebook ​ပေါ်က စိုးရိမ်စရာ သတင်း​တွေ​ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု​​တွေ စိုးရိမ်မှု​တွေ ​​လျှော့ချ​စေချင်ပါတယ်******
စိတ်နဲ့ ကိုယ်ခံအားနဲ့ အရင်တိုက်ရမယ့်​ရောဂါပါ​နော်
-ချစ်ခင်ရတဲ့သူ​တွေ နဲ့ မိတ်​ဆွေေ တွကို အား​ပေးစကား အမြဲ​ပြော​ပေးပါ​နော်။ အားလုံး ​​ရောဂါကပ်ဆိုး​တွေ အဆိုး​တွေ ကြားမှာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာစွာနဲ့ ​ကျော်ဖြတ်ကြရပါမယ်အားတင်းထားပါ မြန်မာ 🙏🙏🙏 (ပုံစာ _ ​​ဆေး​ကျောင်းသူဘဝ ၂၀၁၁_၂၀၁၂) ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နီနီရေး သားထားတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ တကယ်ကို အသုံးဝင်လောက်မယ့် နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီးရောဂါမဖြစ်ဖို့ ကြိုတင်ကာကွယ်ထားရ န်လိုအ ပ်ပါတယ်။ ပြည်သူများအားလုံး ကျရောက်ေ နတဲ့ ကပ်ဆိုးကြီးေ ဘးမှအမြ န်ဆုံးကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
သူမ ရဲ့ဘဝမှာ အခြိနျတိုငျး ဆုံးရှုံးမှုတှရှေိနတောတောငျ ဘယျသူ့ကိုမှ အပွဈမတငျပဲ ခံနိုငျရညျရှိအောငျ ကွိုးစားနတေယျလို့ဆိုလိုကျတဲ့ ထကျထကျမိုးဦး